Semalt: Zava-dehibe ny manaisotra ny Kodiarana Tracking ao amin'ny Google Analytics amin'ny tranonkala iray
Max Bell, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa rehefa mibahana ny Google Analytics mandritra ny fanandramana any an-toerana ho an'ny tranonkala statika sy tsy statika dia afaka mahita soso-kevitra, fitaovana, tricks , ary toro-hevitra. Ny ankamaroany dia angatahana isika na hisintona azy amin'ny alàlan'ny IP na fametrahana fitsipika tokana tokana ho an'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny tranokala.
Avelao aho hilaza aminareo fa ny fomba amam-panao voalohany sy tena marina indrindra ahafahana mametraka ny Google Analytics napetrakao dia ny famerenana ny fangatahana amin'ny tranonkala ofisialin'ny Google Analytics. Azo antoka fa miasa amin'ny solosaina rehetra sy ny fitaovana finday izy io, saingy tsy midika na inona na inona ny fizotran'ny fitsapana amin'ny iPhones sy fitaovana maoderina hafa an'ny Wi-Fi. Ny fametrahana ny fitsapana eo an-toerana dia ny mampiasa ny dev domains amin'ny torolàlana sy ny tetikasanao eo an-toerana, ary avy eo dia mitady ny dikan-teny nalaina amin'ny tranonkalanao mba hahatonga azy ho voaomana amin'ny fitaovana finday sy ny solosaina. Noho izany antony izany, dia matetika aho mampiasa fehezan-dalàna jailbreaking sy ireo antontan-taratasy ho an'ny iPhones raha tsy misy sivana. Niezaka ihany koa i Xip sy Adobe Shadow. Noho izany dia tsy afaka nanivanina ireo fari-piadidiana IP aho satria nanao izany dingana izany tany an-trano. Plus, ny ISPs dia tsy manome adiresy ho an'ny trano fitehirizam-bokatra.
Nanandrana nanamboatra fialana sy fomba amam-panao manokana aho, ka tafiditra ao amin'ny Google Analytics imbetsaka. Izany dia miantoka fa ny mombamomba ahy dia mahazo ny fifamoivoizana sy fomba fijery mahazatra avy amin'ny sehatra maro. Izaho ihany koa dia mametraka ny filaharan'ny mpampiasa mifototra amin'ny anaran'ny mpampiantrano ahy, ary mifanaraka amin'ny lamin'ny Google Analytics amin'ny fomba tsara kokoa. Amin'ny lafiny teknika, sarotra ho antsika ny hikaroka ireo mpampiantrano ireo sehatra tany am-piandohana tany am-piandohana. Na izany aza, raha vao vita ny fiovana mety, dia azonao mora ny vokatra tianao. Fotoana fohy taorian'ny nanesorana ny code tracking Google Analytics tao amin'ny tranokalako nandritra ny dingana natao tamin'ny backup ary nampiany niverina indray, dia hitako fa miasa tsara ny filatro ary ny vokatra farany dia mahafinaritra.
Esory ny fitsidihanao manokana avy amin'ny Google Analytics
Tsy ho mora ny hanaisotra ny fitsidihanao manokana avy amin'ny Google Analytics mandra-panao ny fanovana mety. Ny fanaovana izany dia mety hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fifamoivoizana sy ny antontan'isa ao amin'ny tranonkalanao. Na eo am-piandohan'ny fivoaran'ny tranokala iray aza dia tsy hahazo be dia be ianao na dia efa nataonao aza ny fikarohana. Misy fomba maro samihafa hisorohana ny fitsapana nataonao tamin'ny Google Analytics. Ny fomba sy ny karazany tsirairay dia manana fiantraikany sy fiantraikany, ka mora ho anao ny mifidy ny tsara araka izay takinao. Ny serivisy orinasa na ny backend dia fomba mahagaga sy tsara indrindra. Ny fampiharana azy dia haka fotoana kely, fa ny vokatra farany dia lehibe foana. Noho izany dia mila mampiditra ny code tracking Google Analytics ao amin'ny code HTML an'ny vohikala ianao ary avy eo dia miverena any amin'ny mpizara anao mba hamoronana filtre mety. Fomba iray hafa ny sivana amin'ny Google Analytics, izay ahafahanao manilika ny fitsidihanao manokana ary manitsy ny fatran'ny tranokalanao araka ny adiresy IP. Ity fomba ity dia hamaha ny ankamaroan'ny olana mifandraika amin'ny IP misy anao ary mety hahatonga anao hifanaraka amin'ny fifamoivoizana Source .